Kala Beddelka Bilaashka ah ee ugu Fiican Excel | Golaha Moobaylka
Ignacio Sala | | Microsoft Excel, Barnaamijyada
Xafiiska wuxuu noqday mid mudnaantiisa leh Suite ugu fiican ee codsiyada xafiiska Iyo raadinta waxyaabo kale ma ahan hawl fudud, ilaa iyo inta baahiyaheena aysan aheyn kuwo si xad dhaaf ah u murugsan, tan iyo markaas hadii aan ilaawi karno raadinta codsiyo kale, tanna waxaan ku idhi anigoo og xaqiiqda.
Si kastaba ha noqotee, dadka isticmaala guryaha, isticmaaleyaasha mararka qaarkood abuura dukumintiga ereyga, xaashiyaha ama bandhigga, waxaan haysannaa tiro badan oo beddelaadyo ah. Qodobkaan, waxaan diirada saari doonnaa inaan ku siino adiga beddelka ugu fiican ee Excel, beddelaadyo gebi ahaanba bilaash ah.
2 Ku dhex mari barta internetka
3 Waraaqaha Google
4 Tirada (Mac)
Markaan ka hadlayo Xafiiska, Kama hadlayo Microsoft Office ama Microsft 365Waxaan ka hadlayaa codsi yar oo aad ka heli karto noocyo hoos u dhacay oo ah Xafiiska, Ereyga iyo PowerPoint. Codsigan, oo sidoo kale loo heli karo aaladaha mobilada, wuxuu noo ogolaanayaa inaan abuurno dukumiinti qoraal fudud iyadoo aan la bixin liisanka ama aan adeegsanno nidaamka lacag bixinta ee ay bixiso Microsoft.
Xafiiska waa xalka ugu fiican ee adeegsadayaasha baahi badan uma qabaan markay abuurayaan waraaqo. Codsiga waxaa loo heli karaa si loogu soo dejiyo Dukaanka Microsoft tan isku xirka. Kaliya ma soo dejisan karno nooca dhimay ee Excel, laakiin waa inaan rakibnaa dhammaan codsiyada, set kaas oo sidoo kale na siiya marin u helka OneDrive, Skype, kalandarka ...
Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint iyo inbadan
Ku dhex mari barta internetka
Microsoft waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan ku isticmaalno xafiiska codsiyada ee Officeka adoo adeegsanaya biraawsarkayaga, gaar ahaan koontadayada Muuqaalka, Hotmail ... Nooca shabakada ee la heli karo iyada oo loo marayo koontada Microsoft, Waxay na siineysaa isla shaqooyinka iyo xaddidaadaha aan ka heli karno dalabka Xafiiska ee aan ku soo sheegay tuduca hore.
Haddii aadan rabin inaad ku rakibto barnaamijkan kombiyuutarkaaga, maxaa yeelay isticmaalka aad siin doontid waa mid aad u goosgoos ah, waxaad ku isticmaali kartaa Xafiiska shabakadda helitaanka xisaabtaada emaylka. Nooca shabakadda ayaa noo oggolaanaya inaan galno feylasha aan ku keydinnay dirawalkeenna adag, kaliya ma ahan kuwa laga heli karo OneDrive.
Google wuxuu ku dhejiyaa meeshayaga, iyada oo loo marayo Google Drive, seddex beddelaad oo xiiso leh oo ah Word, Excel iyo PowerPoint, oo loo baabtiisay qaab aan caadi ahayn sida Dukumiintiyada Qoraalka, Faafinnada iyo Soo Bandhigida. Dhamaan barnaamijyadan in ka shaqee oo kaliya adoo adeegsanaya biraawsar laga helo websaydhka Google Drive, waxaa laga heli karaa gebi ahaanba bilaash.
El tirada xulashooyinka la heli karaa aad ayey u yar tahaySi kastaba ha noqotee, haddii aan hayno hawlo xiiso leh sida suurtagalnimada samee miisaska udubdhexaadka ah, hoos u dhig liiska… Midka kaliya ee noo fidiya adeegan ayaa ah, kaas oo ah adeeg oo aan ahayn codsi aan ku soo dejisan karno inaan ku shaqeyno anagoo aan lahayn xiriir internet.
Qeybta adeegyada ee sameynta dukumiintiyada Google, sidoo kale ayaa loo heli karaa qalabka mobilada (macruufka iyo Android). Haddii baahiyahaagu aasaasi yihiin, in la sameeyo afar qaacido oo fudud iyo wax kale oo yar, Google Waraaqaha ayaa ah mid ka mid ah xalka ugu fiican ee laga heli karo suuqa laga heli karo dhammaan desktop-ka iyo barnaamijyada moobiilka.
In kasta oo ay run tahay haddii aan ka hadalno codsiyada Windows-ka, lambarku aad buu u sarreeyaa, markaan raadineyno waxyaabo kale, waa inaan sidoo kale eegnaa nidaamka deegaanka ee macOS ee Apple, maadaama, sida Microsoft, Apple ay na siiso a dhigay codsiyo bilaash ah oo ku jira xirmada iWork.
Lambaradu waa gebi ahaanba bilaash ah in Apple ay diyaar u tahay dhamaan isticmaaleyaasha haysta qalab kasta oo ay leeyihiin. Codsigan sidoo kale waa loo heli karaa aaladaha mobilada, sidaas darteed waxaan ka sameysan karnaa isla miisas isla markaana ka isticmaali karnaa isla shaqooyinka moobilkayaga casriga ah / kiniiniga ama Mac-keena.
Tirada xulashooyinka ee nambarada na siinayaan uma badna sida tan ay bixiso Excel, si kastaba ha noqotee, cusbooneysiin kasta oo cusub, Apple ayaa soo bandhigeysa shaqooyin cusub inyar inyar, waxay u badaleen codsigan bedel aad u ansax ah oo loogu talagalay Excel gudaha nidaamka deegaanka Mac.
Noocyada codsiyada ee aan ku hayno annaga oo u soo marinnay LibreOffice ayaa ka kooban Qoraa, Calc, Impress, Sawir, Xisaab ... Calc waa bedelka bilaashka ah ee ay bixiso LibreOffice, oo ah barnaamijyo furan oo bilaash ah oo bilaash ah oo loo heli karo Windows iyo sidoo kale macOS iyo Linux. Marka laga hadlayo iswaafajinta, LibreOffice Calc wuxuu sifiican ula jaan qaadayaa faylasha .xls iyo .xlsx labadaba.
Tirada howlaha aan ku hayno dhanka LibreOffice aad ayey u badan yihiin waana waxay leedahay wax yar oo ay ku xaasiddo Excel, uguyaraan hadaanan ugu talagalin inaan isticmaalno qaaciidooyin ka baxsan bini aadamka intiisa badan. Naqshadeynta codsigan waxay aad ugu egtahay wixii aan dhowr sano ka hor ka heli jirnay Excel, oo leh is-dhexgal duugoobay oo loogu talagalay xilligan hadda jira oo aan ka gaabinaynin shaqadiisa.
In kasta oo ay run tahay in LibreOffice loo heli karo adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash, sidaas ma aha nooca qalabka moobiilkaMaaddaama ay jiraan codsiyo noocaas ah iyo kuwa jira, ma aha bilaash.
OpenOffice iyo LibreOffice bilowgii waxay ka dhasheen isla mashruuca, laakiin kala duwanaanshaha mashruuca awgood, waxay kala saareen wadooyinkooda iyagoo raacaya isla falsafada isha furan. Codsiyada ay na siiso OpenOffice, waxay si isku mid ah u yihiin kuwa aan ka heli karno LibreOffice, iyo sidoo kale tirada howlaha la heli karo.
Dhamaan codsiyada oo qayb ka ah OpenOffice waa oo bilaash ah ayaa laga soo dejisan karaa iyada oo loo marayo tan isku xirka. Kaliya ma soo dejisan karno Calc, laakiin waa inaan kala soo baxnaa dhammaan barnaamijyada, haa ama haa.
Gnumeric waa codsi lagu abuurayo waraaqaha Linux furan il furan. Gnumeric wuxuu la jaan qaadayaa dhammaan qaababka waraaqaha ee suuqa, oo ay ku jiraan taageerada Lotus 1-2-3. Waxay adeegsaneysaa qaabka XLM sidaa darteed waxaan u dhoofin karnaa dukumiintiyada loo sameeyay HTML ama qoraalka lagu kala gooyay koomayaasha.
Haddii aad jeceshahay barnaamijka furan ee furan laakiin aadan rabin inaad rakibato dhammaan barnaamijyada qayb ka ah OpenOffice ama LibreOffice, Gnumeric waa mid beddel aad u fiican haddii aad isticmaasho jawiga desktop-ka ee GNOME oo ku saabsan Linux, Unix ama GNU iyo derivatives. In kasta oo nooc Windows-ka ah la sii daayay dhowr sano ka hor, haddana waa la iska dhaafay wax yar ka dib, sidaa darteed waxaa loo heli karaa oo keliya deegaanka GNOME.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Qalabka otomaatiga » Microsoft Excel » Beddelka ugu fiican ee bilaashka ah ee Excel